Kọwaa nkuzi nkuzi echichi nke ụlọ mkpọchi PVC n'uju-News-Topflor China amachi
Kọwaa nkuzi nkuzi echichi nke ụlọ mkpọchi PVC n'uju
Echiche:33 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2021-03-11 Mmalite: Saịtị
PVC mkpọchi ala bụ teknụzụ njikọ njikọta pụrụ iche n'etiti ala na ala. Ala kpochidoro pvc dị mfe iji wụnye, ma ọ bụ nke dabara adaba. Mgbe ị na wụnye, enwere ike iji ya na-enweghị gluu, nke dị mma maka ọtụtụ ojiji; enwere ike itinyekwa obere gluu, nke nwere mmetụta nchedo abụọ na mgbochi mmiri na njikọ nke ala.
The ala chọrọ maka mkpọchi plastic ala tupu echichi: ndị leveling ọrụ ga-agwụ agwụ.
Ala: Ogwe nke 1m anya dị ala karịa 3mm. Ala ga-akọrọ kpamkpam, gwọọ ya, ewepụghị ma dị ọcha.
Ntinye nke PVC mkpọchi ala chọrọ ụdị ala: ciment ma ọ bụ ala seramiiki ala.
Enwere ike ịwụnye ala n'elu ala dị, dị ka ala osisi, ala ụlọ, ala ụlọ PVC, wdg, mana enweghị ike itinye ya na ala dị nro, dị ka kapeeti.
Ngwa ihe eji arụ ụlọ maka ịkwanye mkpọchi PVC: ihe mgbochi, igwe mkpụcha, hama, akụ aka, iko iko.
Nwụnye usoro nke ịkwanyere plastic mkpọchi ala:
1. Malite ịtọghe n’elu nkuku mgbidi ahụ. Debe ire nke osisi ahụ na mgbidi ahụ, hapụ ọdịiche nke 10mm n'etiti mgbidi na akụkụ dị mkpirikpi nke bọọdụ ahụ.
2. Dozie mbadamba na-esote ya na akụkụ dị mkpirikpi nke mbido mbụ n'otu akụkụ. Debe mbadamba ala ahụ mgbe ị na-aga n'ihu. Jiri otu uzo iji mezue ntinye nke ahiri mbu. E kwesịrị ịkpụ ala ahụ n'ogologo kwesịrị ekwesị, na-ahapụ oghere 10mm na mgbidi. Bido echichi nke ahiri ozo ya na mbadamba ndi ozo (ogologo oge karie 300mm).
3. Dezie ire nke bọọdụ mbụ nke ahịrị ọhụrụ na uzo nke ahịrị gara aga iji ruo otu akụkụ. Pịa mbadamba ahụ gaa n’ihu ma dina ala.
4. Hazie akụkụ dị mkpirikpi nke bọọdụ ahụ na bọọdụ gara aga arụnyere n'akụkụ ụfọdụ ma pịa ya. Gbaa mbọ hụ na a kpọchiri ọnọdụ bọọdụ a n'otu ya na bọọdụ gara aga.
5. Dịtụ welie bọọdụ ahụ (ya na bọọdụ arụnyere nke ahịrị gara aga, ihe dịka 30mm), pịa ya n'ahịrị gara aga ma wedata ya. Mgbe arụnyere ahịrị atọ mbụ, dozie oghere dị n’etiti ala na mgbidi ruo 10mm. Soro usoro a dị n'elu iji gaa n'ihu nwụnye ya ruo ọgwụgwụ.
Usoro ntinye nke PVC mkpọchi ala: ekwesịrị itinye ya na oghere.
Isi ihe nke iwu tupu ịwụnye ala mkpọchi PVC:
1. E kwesịrị inwe ihe dịka mmụba mmụba 10 mm gburugburu mgbidi, ọkpọkọ na okpokoro ụzọ. Maka ime ụlọ buru ibu karịa 100 square-karịa 10 mita n'ogologo na obosara, enwere oghere ịgbasa. Hapụ oghere nke na-erughị 13 mm n’agbata ọnụ ụzọ na ala, ma hụ na mmeghe na mmechi nke ọnụ ụzọ ahụ agaghị ada n’ala.
2. Enwere ike iji ya n’elu ala simenti na seramiiki tile ma ọ bụ okpuru ala nke tinyegoro mmiri. A ga-atọgbọ akwa nke nkpuchi mmiri na-erughị ala.
3. Mgbe ngwaahịa ahụ abanye na saịtị echichi ahụ, ọ ga-etinye ya na ventilashị, azụ azụ, na ebe na-enweghị iru mmiri. A ghaghị ịchekwa ngwaahịa ahụ na ụlọ okpomọkụ na-enweghị mmeghe ngwugwu maka awa 48 tupu echichi ya.
4. Tinye ihe dị arọ mgbe niile (dịka otu mbadamba bọọdụ) n’elu ebe ị na-ejikọ oge ọ bụla iji mee ka ọ kwụsie ike.
5. Edebere elu: Thedị mkpọchi ụdị ihe mgbochi mmiri nwere ọkpụrụkpụ nke 1mm na ala dị elu nke 10.5mm, na-agụta 11.5mm. Onye ahịa kwesịrị idozi 12mm dịka akụkụ nke kọntaktị na ala ndị ọzọ dị elu karịa ngwaahịa nke emechara, ọkachasị mkpuchi ọnụ ụzọ, akuku, mkpuchi kpo oku na nkọwa ndị ọzọ na-adịghị mma, nke ekwesịrị ịkpa
Otu esi edozi ahihia artificial
Gịnị inyeaka ihe ndị dị mkpa maka azụmahịa plastic n'ala paving